Dallada Dhalinyarada Koonfurta iyo Bartamaha Soomaaliya (SOCSOYU) oo Qabtey Kulan Wacyigelin ah oo ku saabsan Khatarta Cudurka Dabeysha
Dallada Dhalinyarada Koonfurta iyo Bartamaha Soomaaliya (SOCSOYU) oo Todobaadadii dambe waday Olole ay shacabka kaga Wacyogalinayaan sidii looga Hortagi lagaa Cudurka Dabeysha waxaa Xaflad ay kasoo qeyb galeen Dhalinyarada Dalada Koonfurta iyo Bartamaha Soomaaliya, Ardayda Jaamacadaha ee Barta kuliyada Caafimaadka, qaar kamid ah Ururdada Blshada Rayidka iyo Marti Sharaf kale ayaa lagu qabtay Magaalada Muqdisho.
Munaasabadaan oo ahayd mid si weyn loo soo Agaasimay ayaa waxaa looga hadlayey Khatarta uu leeyahay Cudurka, iyadoo intii ka qayb gashay ay si isku mid ah uga hadleen Khatarta uu leeyahay Cudurka Dabeysha, waxaana ay Mujtamaca Soomaaliyeed ugu baaqeen in si wadajir ah uga hortagaan Cudurka Dabeysha.
Waxaa ugu horeyn ka hadlay Munaasabadaas Mahad Caabi Ciise oo ka mid ahaa Dhalinyaradii ka soo qeyb gashay kana mid ah Ardayda Jaamacadaha Muqdisho kuyaala wax ka Barta gaar ahaan Kuliyadda Caafimaadka ayaa sheegay in Bulshada looga fadhiyo sidii ay u qaadan lahayeen Tallooyinka ay Dhaqaatiirka soo gudbinayaan oo ku saabsan Khatarta uu leeyahay Cudurka Dabeysha.
Ugu dambeyntii Guddoomiyaha Dalada Dhalinyarada Kooonfurta iyo Bartamaha Soomaaliya Maxamed Warsame Sandhool ayaa sheegay in ay ku dadaalayaan sidii ay uga Hortagi lahaayeen Cudurka Dabeysha, waxaana uu u Mahadceliyey inta kala qeyb qaadatay Ololahaan looga Hortagayo Cudurkaasi.
“Wax kasta waxa ay u baahan yihiin in lagu Dadaallo, lagana hortago Khatarta ay u leeyihiin Bulshada , ayna Muhiim tahay in la Dabargooyo Cudurka Dabeysha si uusan u saameynin jiilka soo koraya, waxaana idinkaga Mahadcelinayaa sida aad u daneyneysaan in aan Wadajir ugu Howlgalno Ololaha lagu Wacyigelinayo Bulshada ee ku saabsan Dhibaatada uu leeyahay Cudurkan” ayuu yiri Sandhool.
Waxaa Maamlmahaan socdey Olole looga Hortagayo Khatarta Cudurka dabeysha maadaama Dalka Soomaaliya lagu arkey Calaamado Muujinayo Kiisas Cusub oo ku Saabsan Cudurka Dabeysha sidoo kalena ay jiraan Dad waa weyn oo la qaba Cudurkaas marka Dhamaanteen waxaan u taagan nahay sidii Dalka looga Ciribtiri lahaa Cudurkaas .